Ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP oo war saxaafadeed uu soo saaray ku dhalleeceeyey xariga weriye C/fitaax J. Mire & caburinta suxufiyiinta. – Radio Daljir
Ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP oo war saxaafadeed uu soo saaray ku dhalleeceeyey xariga weriye C/fitaax J. Mire & caburinta suxufiyiinta.
Agoosto 18, 2010 12:00 b 0
Ururka Warbaahinta Puntland ~ Media Association of Puntland (MAP)
Telephone: Office 252 84 64 15
War murtiyeedka Shirka Suxufiyiinta MAP ee Puntland
Shir ay yeesheen suxufiyiinta Puntland 18-ka bisha Ogosto, 2010 kagana xaajoodeen xaaladaha cusub ee dalka ku soo kordhay, gaar ahaan xayiraadaha iyo cadaadiska ka dhanka ah warbaahinta Puntland oo halkii ugu xumayd gaaray toddobaadyadii lasoo dhaafay, tallaabadii u dambaysayna ay ahayd xariggii iyo xukunkii lixda sano iyo $500 ahaa ee 14kii bishan lagu qaaday Agaasimihii Warbaahinta Horseed Media xarunteeda Bosaaso, Cabdifitaax Jaamac Mire, Taas oo aan u aragnay in uu ahaa xukun nidaamka caddaaladda iyo qaanuunka Puntland, kan Jamhuuriyadda Federaalka iyo xeerarka caalamiga ah ba ka baxsan.
Sida ay qabaan sharciyada dalka iyo xeerarka caalamiga ah ee Soomaaliyana ay saxiixday: Qof walba xaq ayuu u leeyahay xorriyadda fikirkiisa iyo is-cabbiraadda; xuquuqdaas waxaa ka mid ah in qofku ra?yi yeelan karo iyadoo aan lagu samayn Karin wax faafreeb ah iyo faragelin, waxaana qofkastaa xaq u leeyahay in uu raadsado helana xogta iyo fikradaha muhiimka ah ee uu u baahan yahay oo ka doonan karo il kasta oo warbaahineed iyadoon xudduudo loo eegayn.
Dastuurka Puntland waxaa uu si buuxda u dammaanad qaadayaa xorriyadda iyo xuquuqaha saxafadda, madax bannaanida saxaafadda iyo xaqa muwaadinka ee doonashada iyo helitaaka xogta lagama maarmaanka ah.
Qodobka Dastuurka Puntland ee Xorriyadda Fikriga waxaa uu si cad u qirayaa sidatan:
1.	Qof kasta xor buu u yahay fikraddiisa wuuna soo bandhigi karaa. Faafreeb hor u dhac ahi waa reebban yahay.
2.	Qofku waxa uu fikraddiisa ku cabbiri karaa qaab hadal, saxafadeed, qoraal, baahin, muuqaal, suugaan iyo habab kale oo sharciga iyo anshaxa waafaqsan faragelin la?aan.
Qodobka Dastuurka ee Xaqa Saxaafadda wuxuu leeyahay:
1.	Saxaafadda iyo Warbaahintu waa ay madaxbannaan yihiin lamana faragelin karo, waxayna u hoggaansamayaan sharciga oo keliya.
Sharci lambar 5 ee nidaamiya saxaafadda Puntland qodobkiisa 10aad waxaa uu dhigayaa in weriyayaashu ay u madaxbannaanyihiin raadsashada xogaha la xidhiidha shaqadooda warbaahineed.
2.	Qodobka 20aad ee Axdiga Ku-meel-gaarka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya wuxuu oranayaa;
3.	Dawladda federaalka Ku-meel-gaarka ah waxay sugaysaa xooriyadda jaraa?idka iyo madaxbannaanida warbaahinta si waa faqsan sharciga. Qof waliba wuxuu xaq u leeyahay in uu si xor ah u bandhigo fikirkiisa gaarka ah si kastaba ha ahaatee.
Suxufiyiintu kulankan waxay ka soo saareen bayaan ka kooban qodobada soo socda
1.	Waxaan cambaaraynaynaa xarigga iyo xukunka 6 da sano iyo 500 oo doolar ah ee lagu qaaday 14kii bishan Agaasimihii Warbaahinta Horseed- Xarunteeda Boosaaso, cabdifataax Jaamac Mire. Go?aankaas oo aan u aragno caddaalad darro sharciga iyo qaanuunka dalka ka baxsan. Isla markaana ku gefaasha qodobada dastuuriga ah ee ku qeexan Dastuurka Puntland ee damaanad qaadaya xaqa is-cabbiraadda, xorriyadda hadalka iyo madaxbannaanida warbaahinta.
2.	Goleyaasha Dawlad Goboleedka Puntland, waxay ka dalbanaynaa in si dhaqso ah weriyaha Cabdifitaax Jaamac mire xorriyaddiisa loogu soo celiyo si uu ugu madaxbannaanaado gudasha waajibaadkiisa sharciga ah.
3.	In Dawladdu ay aqoonsato kaalinta warbaahinta iyo doorka suxufiga madaxabannaan in ay tahay mid aan marna looga maarmin samatabixinta bulshada iyo horumarka habboon ee ay tahay in la tiigsado.
4.	Waxaan ku boorrinaynnaa dowladdu in ay qaaddo dhammaan xayiraadaha saaran Warbaahinta madaxa bannaan. Waayo Xayiraadaha saran helitaanka warbaahin madaxbannaan oo xor ah oo ka hirgasha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya waxay caqabad halis ah ku tahay dhismaha nabadda, horumarka bulshada iyo dimoqraadiyadda ku meelgaarka ah bulshada Puntland hiigsanayso iyo ta Soomaaliyeed ba.
5.	Waxaan dowladda Puntland xasuusinaynnaa Warbaahin madaxbannaan oo xor ah oo aan cidna cabsi ka qabin waxay lagama maarmaan u tahay dib-u-dhiska nabadda, xasiloonida, horumarinta tiirarka asaasiga ah ee is-maamul wanaagga, dimoqraadiyad iyo horumar ku salaysan dhawrista xuquuqda dadka ee Puntland.
6.	Iyadoo laga duulayo mabaadida asaasigaa ee xaqa fikiraka xorta ah iyo xaqa is-cabbiraadda waa in warbaahinta loo abuuro jawi iyo xaalad ay bulshada ugu gudbin karto xogta u sahlaysa helitaanka fursad ay kaga taliyaan arrimaha iyo go?aamada noloshooda saameeya. Si warbaahintu u buuxiso kaalinta saxaafaddu kaga jirtay halganka ummaddu ku hiigsanayso horumar nololeed oo xasiloon kuna dhisan Caddaalad, Ismaamul-wanaag, Dimoqraadiayad iyo horumar ku salaysan daryeelka xuquuqda dadka oo la jaanqaadi kara Horumarka dhinac walba leh ee ummaddeennu u qalanto loona baahan yahay in ay tiigsato.
7.	Iyagoo maanka ku haya in cawaaqib-xumadii laga dhaxlay cabburintii ra?yiga dadka ay galaafatay dowladdii Soomaaliyeed ee buburtay, qalalaasihii ka dhashayna weli laga soo kaban la’ yahay, waxaa maangal ah la garwaaqsado waddada keliya ee lagu hanan karo midnimo ummadeed, kalsoonida shacabka, horumar siyaasadeed, mid dhaqaale iyo nabadgelyo, in ay tahay in la ogolaado dood-wadaag ku dhisan aqlabiyadda kala duwanaanta ra?yiga iyo xorriyadda hadalka.
M/weyne Faroole oo xarigga ka jaray madaarka cusub ee Garowe & madax kale oo ka hadashay baahida & dhismaha madaarka Garowe.